Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Michael Obafemi Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Anyị Michael Obafemi's Biography na-akọwa nkọwa gị banyere Akụkọ nwata, ndụ ezinụlọ, nne na nna, ndụ ịhụnanya (enyi nwanyị na nwunye), Ndụ, Networth na ndụ onwe onye. Na nkenke, anyị na-ewetara gị nkọwa zuru oke nke Akụkọ ndụ ya, site na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, onye ọ bụla maara aha ezinụlọ Michael Obafemi na-echetara otu Obafemi Martins- Onye Naijiria na-aga n'ihu mara maka ụda ọsọ. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ Michael Obafemi's Biography nke na-ekpughe ọtụtụ ihe banyere ya. Ugbu a, na-enweghị n'ihu gaa ka anyị malite.
Michael Obafemi Childhood Akụkọ:
Maka ndị bidoro akụkọ ndụ ya, a na-akpọ ya "Mica." Michael a mụrụ Michael Oluwadurotimi Obafemiwas na 6th ụbọchị nke July 2000 na isi obodo Dublin na Ireland. Onye egwuregwu bọọlụ Irish mụrụ nne ya, Ms Bolajoko Oredein na otu nna amaara ama.
Michael Obafemi Ezinụlọ:
Nke mbu, onye na-egwu ihe a bu nwa amaala obodo nke Ireland. Agbanyeghị, nsonaazụ nyocha emere iji chọpụta ebe ezinụlọ Michael Obafemi si gosi na ọ bụ onye agbụrụ dị na Yoruba.
Agbụrụ a na-akacha akụkụ nke ọdịda anyanwụ Nigeria. Site n'echiche, ndị nne na nna Michael Obafemi bụ ndị Africa na ndị Nigeria. Onye na-agba bọọlụ n’onwe ya bụ Irish ma nwee ọbara ndị Naijiria na-aga n’arụ n’iru.
Michael Obafemi Na-etolite Afọ:
Know mara na onye ma nka n’egwuregwu bọọlụ ka dị obere mgbe nna ya na nne ya kwagara England? Ọ bụ na mba ahụ ka Obafemi dị afọ 4 bidoro ya na nwanne ya nwoke nke okenye, Afolabi Obafemi.
Anyị na-egwuri egwu bọl n'èzí ụlọ m mgbe niile. Omume anyị gụnyere ịgba bọọlụ na ngbagide agbata obi anyị ruo mgbe anyị nwetara nkọwa, ”
kwuru na onye egwu egwuregwu nke mmalite mmalite ya na football.
Michael Obafemi Ezinaụlọ:
Nke bụ eziokwu bụ na o si n’ezigbo ezinụlọ bara ụba mana ọ bụ ndị ụlọakụ n ’ụlọ. Mgbe ha nọ England, nne na nna Michael Obafemi gara biri na Chingford. Mpaghara bụ mpaghara ime obodo na North East London. Papa papa na mama Michael Obafemi hụrụ na e lekọtara ya nke ọma. Ya mere, o toro obi uto dika otutu umuaka n’etiti North East London.
Otu ọrụ bọọlụ bidoro maka Michael Obafemi:
Mgbe oge ruru, akara aka nke ndị agba bọọlụ bidoro ịkpọ. Laa azụ n'oge ahụ, nne na nna Michael Obafemi chere na ọ dị mkpa inye mmụọ ya mmụọ nduzi bara uru. Dika odi, ha huru n’enye aha ya maka inweta nkuzi n’ulo ndi umuaka - Ryan FC na Chingford.
Michael Obafemi Oge izizi ya na Chelsea, Arsenal na Watford:
Uto nwata a na Chingford mere ngwa ngwa nke mere na ọ gara n’ihu itinye oge ndi ozo nke ndi ocha n’egwuregwu mahadum di iche-iche. Acadelọ akwụkwọ agụmakwụkwọ gụnyere Chelsea, Arsenal na Watford.
Michael Obafemi Childhood Akụkọ- O nwetara nzụlite ọrụ ya n'ọtụtụ agụmakwụkwọ football. : Twimg.
N’oge ọ ka na-eto eto Obafemi na Watford, amaara onye na-agba bọọlụ achọtara azụ n’azụ ugboro iri na otu n’otu egwuregwu. Mgbe nke a gasịrị, klọb ahụ wepụtara ya mgbe ọ dị afọ 11.
Michael Obafemi Biography - Tozọ Iji Ama Akụkọ:
Mgbe mwepuchara bọọlụ ahụ hapụrụ Watford, o wepụrụ otu afọ pụọ na nnukwu egwuregwu iji tụgharịa uche na ọ chọrọ bọl dịka egwuregwu egwuregwu ka ọ bụ na ọ chọghị. Ọ tụgharịrị uche banyere ọtụtụ ọrụ ọrụ ọ ga - aga ije ma ọ bụrụ na football agaghị aga nke ọma. Dika ha huru n’anya, nne na nna Michael Obafemi no ebe a ikasi ya obi n’oge ahu nke ndu ya.
Mgbe nwa ahụ dị afọ 15 kpebiri mkpebi ya, ya na mama ya so ya kerịta atụmatụ ya maka ọdịnihu. Mama Obafemi nyere ya nkwado zuru oke, na-agba ya ume inye 100% mbọ ya na egwuregwu ahụ. Site na ndụmọdụ nne na nna, onye egwuregwu bọọlụ Irish laghachiri na ntụrụndụ ochie ya.
Oge adịghị anya tupu onye egwuregwu bọọlụ sonyeere Leyton Orient na 2015 maka otu afọ. Ọ mechara bịanyere aka na Southampton na 2016. Ọ gara n'ihu mee egwuregwu izizi ya maka ndị Senti na Jenụwarị 2018 n'oge otu egwuregwu 1-1 na Tottenham Hotspur.
Site na mpụta mbụ, Obafemi ghọrọ onye ọkpụkpọ nke abụọ nke mere Premier League ka ọ pụta ìhè na Southampton ka emechara Luke Shaw (Afọ 17 na 116 ụbọchị). Ka ọnwa ole na ole gasịrị na Disemba 2018, Obafemi ghọrọ onye na-eto eto nke mbụ Southampton na Premier League mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Ndị Nsọ na mmeri 3-1 na Huddersfield.
Kemgbe ahụ, o meela aha ọfụma megide nnukwu klọọkụ- ọ kachasị nso na-emebi olileanya Man United nwere maka ịbịanye ọkwa nke atọ na ntanetị ọkwa ọchịchị 2019 /2020 mgbe nkwụghachi azụ CAFID-19. Naanị obere oge tupu ọ bụrụ onye na-eme ihe mgbe niile na mgbe ahụ, anyị na-ahụ nnukwu klọọkụ na-arịọ arịrịọ maka mbinye aka ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Michael Obafemi- Nwanyị nwanyị, Nwunye, Nwaanyị Di, ,mụaka?
Ngwá ọrụ ịgba bọl abụwo ihe buru ibu na idebe ịhụnanya ha na nzuzo. N'ihi nke a ọ bụ ihe siri ike ịkọ onye bụ nwanyị nwanyị Michael Obafemi ma ọ bụ ọ nwee nwunye n'ezie.
Onye ọkpụkpọ a ka ga-ahụ anya na nwanyị ọ bụla nwere ike ịkpọ enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye ya na-agbasi mbọ ike ka ọ bụrụ onye kachasị mma na ọ nwere ike ịnọ n'egwuregwu bọọlụ. Na agbanyeghị, ọ nwere ike ogologo oge tupu anyị ahụ foto nwanyị ya na nwanyị mara mma.
Michael Obafemi Life Life:
Inwe ezinaụlọ na-akwado ya bụ ihe mgbaru ọsọ kasịnụ na-akpali ndụ onye na-agba ọsọ egwuregwu Irish. N'ebe a, anyị na-ewetara gị akụkọ banyere nne na nna Michael Obafemi na ụmụnne ya. Anyị ga-akọwakwa ihe ndị mere banyere ọmụmụ ya. Ugbu a, ka anyị malite.
Banyere nne na nna Michael Obafemi:
Nke mbu mana odighi otutu ihe banyere nna Obafemi Michael. Agbanyeghị, anyị maara na nne ya Ms Bolajoko Oredein bụ otu n'ime ndị ọ kacha mara amara. Ọ na-anọ ya mgbe niile maka onye ọkpọ ahụ ma nọ ya na-ekiri ka ọ na-eme egwuregwu mbụ ya maka ndị otu egwuregwu mba Ireland mgbe ọ dị naanị afọ 18.
Ihe ọzọ bụ? Bolajoko Oredein mere ka ọ bụrụ ọrụ dị mkpa ịbịa maka egwuregwu nwa ya nwoke ọ bụla n'agbanyeghị na ọ nọ n'oche ma ọ nọ.
Banyere nwanne Michael Obafemi:
Afolabi Obafemi bụ nwanne ọkpọ ahụ. Ha tolitere na-egwu egwuregwu bọl ọnụ ma ha abụọ nọ na Leyton Orient dị n'ohu tupu ndị ọrụ ha na-ebute ụzọ dị iche iche. Ọrụ nke Afolabi bụ nke enweghị atụ. Ọ na-egwuri egwu na bọọlụ dị obere tupu ọ gbadata na Wingate & Finchley, na Isthmian League Premier Division. Lee bụ Afolabi Obafemi.
Zute nwanne nwanne Michael Obafemi Afolabi. : Akwụkwọ akụkọ
Banyere Michael Obafemi:
Apụghị site na ndị ezinụlọ nke ndị na-eme ihe nkiri, nkọwa gbasara agbụrụ ọmụmụ ya nwere ike ịchọrọ na Nigeria ọ bụghị Ireland. Nke a bụ ọkachasị dịka ọ gbasara ndị nne na nna ya. Na mgbakwunye, nna nna Obafemi, nwanne nna ya, ụmụ nwanne nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
Ka anyi gaa na ndu nke “Mica” n’enweghi nkuzi na inye mmekpa ahuhu. Know mara na enwere nkwekọrịta mgbe ọ bụla a gwara ndị enyi, ndị ezinụlọ na ndị otu ya ka ha kọwaa onye ọ bụ?
Ha na-egosi n'eziokwu ahụ bụ na Obafemi bụ onye dị ka okike nke nwere okike, ike, obi nwere ọgụgụ isi na onye nwere oke agụụ dịka ndị mmadụ akara Zodiac bụ Ọrịa Ọrịa kansa. Ọ hụrụ n'anya igwu mmiri, ime njem, na-ekiri ihe nkiri, iwepụta oge dị mma na ezinụlọ na ndị enyi n'etiti ihe ndị ọzọ na ihe ntụrụndụ ndị ọzọ.
Tomata otu ụdị akụ bọọlụ na otu o si etinye ego ya n'ihe egwuregwu ga - enyere gị aka ịghọta ya nke ọma.
Net Oba nke Michael Obafemi:
N'oge edere Bio ya (2020), youmaara na ụgwọ ọrụ ya kwa afọ bụ mkpokọta 600,000 Euro (525,000 Pound)? Nke a tinye ụgbụ Michael Obafemi nke ruru nde Euro 1.7. Ugbu a, ka anyị gwa gị otu onye ọkpọ ahụ na-eme ma na-emefu ego ya.
Enweghị sayensi roket maka etu Obafemi si kpakọ akụ ya maka na bọọlụ dịka anyị siri mara na ọ bụ egwuregwu ama ama. N’ezie, ego ọ na-enweta na ya akwado ezughị iji lekọta ụgbọala ndị ọ mara mma ma mee ka ụlọ dị ọnụ ahịa na-agba ọsọ.
Eziokwu Michael Obafemi:
Ndenye aha anyị na “Mica” (aha otutu ya) ga-abụ ezughị oke ma ọ bụrụ na anyị emezughị ihe ndị a chọrọ. Dịka nke a anyị na-ewetara gị ihe ole na ole banyere onye na-ebuso anyị agha iji nyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Eziokwu # 1 - FIFA 2020 Rating:
Obafemi nwere oke ogbenye FIFA FIFA 2020 nke 67 isi. Otu ọkwa ahụ anaghị ekwu maka ọnọdụ ya dị ka Onye Mgba. Obi ndị na-atọ ndị egwuregwu ụtọ enweghị obi ụtọ na mmepe ahụ ma na-akpọ oku maka mmelite ya.
Eziokwu nke 2 - Trivia:
Naanị mmadụ ole na ole maara eziokwu banyere afọ ọmụmụ Obafemi - 2000 dị mkpa maka ọtụtụ ihe omume teknụzụ. Emepeela nnukwu Ferris Wheel ma ọ bụ nleba anya nke ụwa (London Eye) na 2000. Ọ bụkwa otu afọ ahụ ka Dot Com Bubble Bursts na puku puku DotComs na-aga.
Eziokwu # 3-eligkpụrụ:
Obafemi bụ Christain. N'ezie, nleta na ibe ya nke Instagram ga-eme ka ị kwenye na ọ bụ onye kwere ekwe, ọkachasị mgbe ị na-ele vidiyo nke nka onye ọka iwu setịpụrụ mkpokọta. Isi okwu vidiyo a bụ amaokwu Akwụkwọ Nsọ a ma ama nke na-agụ - "Enwere m ike ịme ihe niile site n'aka onye na-enye m ike."
Aha n'uju Michael Oluwadurotimi Obafemi
aha otutu Mica
Ụbọchị ọmụmụ 6th nke Julaị 2000
Ebe amụrụ onye Dublin na Ireland
Ndị nne na nna Ms Bolajoko Oredein (nne)
Nwanne Afolabi Obafemi (nwanne).
omume ntụrụndụ Ido mmiri, ije, ikiri ihe nkiri na iwepụta oge zuru oke na ezi na ụlọ na ndị enyi
elu 5 ụkwụ, 7 sentimita
Ngwakọta Net Nde Euro 1.7
ụgwọ 600,000 Euro kwa afọ
Daalụ maka ịgụ ihe odide a dị nkọ na Michael Obafemi. Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na akụkọ ndụ ya enyewo gị nkuzi banyere mkpa iji nyefee ihe gị niile n'ihe ọ bụla na-amasị gị. Inwere ahịrịokwu na-ezighi ezi ma ọ bụ nke na-ezighi ezi n'oge ezighi ezi? Ọ bụrụ ee, biko mee ọfụma ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụ tinye ozi na igbe kwuru.